PCB Material - Pandawill Technology Co., Ltd
IPandawill PCB bayakujabulela ukunikela ngobubanzi obubanzi bezinto ezijwayelekile nezikhethekile ze-laminate ne-substrate ukuze zihambisane nezidingo zakho ezithile zohlelo lokusebenza.
Lezi zinto zibandakanya lezi zigaba ezilandelayo:
> I-FR4 (ukulinganisa okujwayelekile kuya kokuphakeme kwe-Tg)
> PTFE (Rogers, Arlon nezinto ezifanayo)
> Izinto zobumba
> Izingxenye ze-Aluminium
Sihlala sigxila enanini nentengo engcono kakhulu kumakhasimende ethu, sivame ukweluleka ngokugwema ukusetshenziswa kwabakhiqizi bezinto ezifana no-Isola noRogers ngaphandle kokuthi kucaciswe ngokucacile njengesidingo esifana nokuvunywa. Isizathu ukuthi ziyabiza kakhulu futhi ngokujwayelekile zine-MOQ futhi zidinga isikhathi eside ukungenisa izinto zokwakha.
IPandawill inikela ngobubanzi obubanzi bezinto ezisezingeni eliphansi ze-FR4 ezihlanganisa i-Tg spectrum ephelele njengoba kuceliwe, futhi iminyango yethu yobunjiniyela yeCAM izophakamisa imininingwane ebekiwe yokusetshenziswa kuzicelo eziyinkimbinkimbi noma ze-HDI ukugwema izingqinamba zesendlalelo sangaphakathi ngesikhathi senqubo yokuhlangana okushisayo.
IPandawill inikezela ngamalaminethi wesisindo sethusi ahlukahlukene ukwanelisa izinhlelo zokusebenza zamanje ze-PCB futhi sigxile ekunikezelweni kwama-aluminium substrates ukuze asetshenziswe ezinhlelweni zokukhanyisa ze-LED lapho i-PCB iyisetshenziswa esisebenzayo sokushabalalisa ukushisa ngaphakathi komklamo ophelele womhlangano.
Okokusebenza okuguqukayo nokuguquguqukayo kwe-flexi, sinikeza nemithetho ephelele yokuqamba kanye nomhlahlandlela wokukhiqiza ukuze kuzuzwe imiphumela emihle kakhulu yezinhlelo zakho zokusebenza.
Abahlinzeki bethu bezinto ezibonakalayo: